यो हो दुनियाँकै ठूलो भ्यागुता
भदौ ८, काठमाडौं । एउटा भ्यागुता कतिसम्म ठूलो होला ? अफ्रिकामा दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो भ्यागुता छ, जसको तौल ३ किलोभन्दा ठूलो छ । गोलियथ प्रजातिको उक्त भ्यागुताका बारेमा बर्लिनस्थित नेचुरल हिस्ट्री म्युजियमले गरेको अनुसन्धानले केही अनौठा तथ्यको खुलासा गरेको छ ।
शोधकर्ताका अनुसार यो भ्यागुताले आफू बस्नका लागि आफैं नै सानो पोखरीको निर्माण गर्ने गर्दछ । कहिलेकाहीँ त आफ्नो लागि कुवा बनाउन यो भ्यागुताले दुई किलोभन्दा धेरै वजन भएका ढुंगाहरु पनि खनेर फ्याँक्ने गर्दछ ।
यो भ्यागुताको वजन ३ किलो ३ सय ग्राम छ भने यसको लम्बाइ ३४ सेन्टिमिटर अर्थात् १३ इन्चसम्म हुन्छ । यो भ्यागुता भीमकाय त हुन्छ नै, आफ्नो सन्तानको हेरचाह पनि निकै विशेष तरिकाले गर्दछ । यो भ्यागुता जुन कुवामा बस्दछ त्यसमा जन्माएका बच्चाको सुरक्षाका लागि पानीमा फिँज निकालेर राख्दछ ताकि उक्त फिँजमा अन्य जनावरहरु नआउन् ।
गोलियथ प्रजातिको यो भ्यागुता अफ्रिकी देश क्यामरुन तथा इक्विटेरियल गिनीलगायतका देशमा पाइन्छ । साथै दक्षिण अफ्रिकाको एम्पुला नदीको किनारामा पनि यो प्रजातिको भ्यागुता पाइन्छ । शोधकर्ताहरुले यो भ्यागुताका अण्डा रहेका विभिन्न २२ ठाउँ पत्ता लगाएका छन् । कतिपय ठाउँमा करिब २८ सय अण्डा पाइएका छन् ।
प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र ८ गते आइतवार
विद्यार्थी राजनिति पछि निर्माण व्यवसायमा लागेका ‘डिल्ली प्रकाश केसी’
महिलाले छाडा भाषा रूचाउनुको कारण यस्तो छ
वर्षे फलफुल विरुवा माग सम्बन्धी कृषि विकास कार्यालय सल्यानकाे सुचना
के कोरोना खोप लगाएका व्यक्तिको शरीरमा साँच्चै फलाम टाँसिन्छ ?
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि कृषि विकास कार्यालय सल्यानकाे सुचना
जनपत्रकार संगठन लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षमा दिपेश विष्ट
सल्यानमा काँग्रेसकाे चुनाव : पुरी र विष्टकाे समुहले बराबर पालिका जिते (सुचि सहित)
काँग्रेसकाे सल्यान बनगाड कुपिण्डेमा मत परिणाम राेचक
अखिल क्रान्तिकारीकाे अध्यक्षमा प्रकाश शाही